[Wednesday, September 13th, 17] :: Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka dooday arrinta Qalbidhagax
Mogadishu (RH) Xidhibaannada golaha shacabka ayaa maanta oo Arbaca ah ka dooday arrinta Cabdikariin Shiikh Muuse oo bishii horre dowladda Soomaaliya u dhiibtay dowladda Itoobiya.
Kooramka baarlamaanka ayaa maanta buuxsamay.
Markii guddoomiyaha baarlamaanka uu furay kulanka oo maanta looga doodayey arrinta Qalbi-dhagax waxaa isku qoray 52 xildhibaan si ay uga doodaan arrintan.
Xildhibaan kasta ayaa kulanka ka soo jeediyey dooddo ku saabsan arrinta Qalbi-dhagax waana ay ku kala aragti duwanaayeen.
Dood dheer kaddib, waxaa guddoonka baarlamaanka ay go’aamiyeen in arrinta Qalbi-dhagax loo xil saaro guddiyada joogtada ee baarlamaanka kuwaasoo ka keeni doona qorshe dhammeestiran oo ku aadan mowqifka baarlamaanka ee arrintan oo dood weyn dhalisay.
Lixdii bishan ayaa golaha wasiiradda ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay taageereen go’aankii dowladda ay ku dhiibtay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi-dhagax, isla markaana ONLF ku sheegtay urur argagixiso, in kastoo arrintaas ONLF ay ka soo horjeesatay.
Si kastaba, xildhibaannada Soomaaliya ayaa arrintan si weyn ugu kala ra’yi duwan, iyadoo qeyb ka mid ah xildhibaanadu ay taageersan yihiin go’aanka xukuumadda oo ay sheegeen inay aheyd tallaabo sax ah halka kuwa kale ee ka soo horjeeda ra’yigaasna ay go’aanka golaha wasiirada ku tilmaameen inuu ahaa khiyaamo qaran.
Sidoo kale, waxaa arrinta Qalbi-dhagax dib u dhigay xildhibaannada aqalka sare oo ka dooddi lahaa Isniintii, iyagoo ku kala aragti duwanaaday.
Magaalada waxaa tan iyo markii arrintan ay soo ifbaxday ka socday kulamo looga hadlayo arrinta Qalbi-dhagax.
posted on Wednesday, September 13th, 17